Horudhac: Manchester City vs Arsenal… (Arteta oo caawa booqanaya Pep Guardiola oo uu ka sarreeyo Shan dhibcood & 10 boos) – Gool FM
Horudhac: Manchester City vs Arsenal… (Arteta oo caawa booqanaya Pep Guardiola oo uu ka sarreeyo Shan dhibcood & 10 boos)
Haaruun October 17, 2020
(Manchester) 17 Okt 2020. Labo saaxiib oo hore ah ayaa cusbooneysiinaya isbarasho markale caawa oo Sabtida ah marka Mikel Arteta uu Arsenal u kaxeeyo garoonka Etihad Stadium si ay ula ciyaaraan Manchester City iyo macallinkii uu lataliyaha u ahaa ee Pep Guardiola.
Waxa ay ahayd bilow aad u hooseeya kooxda martida loo yahay, kuwaasoo caawa soo soo dhoweynaya Arsenal oo horyaalka Premier League kaga sarreysa shan dhibcood iyo 10 boos.
Taariikhda: Sabti 17 Okt 2020
Saacadda ay bilaabaneyso dheesha: 07:30 Fiidnimo xilliga geeska Afrika.
Garsooraha: Chris Kavanagh (England)
Xiddiga kooxda Manchester City ee Kevin De Bruyne ayaa seegi doona kulanka Sabtida sababo la xiriira dhaawac aan la cayimin oo uu ka soo gaaray waajibaadka xulkiisa toddobaadkii tagay.
Raheem Sterling waa taam, halka Sergio Aguero laga yaabo inuu ciyaaro markii ugu horreysay tan iyo markii uu u baahday qalliinka jilibka ah bishii June.
Saxiixa cusub ee Arsenal Thomas Partey, kaasoo ay maalintii ugu dambeysay ay kula soo wareegtay 45 milyan oo gini ayaa safan kara kulankiisii ugu horreeyey.
Kieran Tierney ayaa iskiis isku karaantiilaya kaddib markii saaxiibkiisa ay ka wada tirsan yihiin xulka qaranka Scotland ee Stuart Armstrong laga helay Korona Fayras, laakiin weli lama shaacin xaqiiqada ah inuu seegi doono kulankan.
>- Manchester City ayaa guuldarro la’aan ah (unbeaten) sagaalkoodii is-arag ee Premier League, waxaana ay dhalisay ugu yaraan labo gool mid kasta oo ka mid ah kulammadaas, tan iyo markii ay guuldarradii 1-2 ee soo gaartay bishii December ee sanadkii 2015 (7 guul iyo 2 barbaro).
>- Arsenal ayaa laga yaabaa inay lumiso todobo kulan oo isku xigta oo horyaalka ah oo ay ka horyimaadaan, isla kooxda ka soo horjeedda markii ugu horreysay tan iyo markii ay sidaasi sameeyeen kulankii Ipswich intii u dhaxeysay 1974 iyo 1977.
>- Guushii ay kali ku noqotay Gunners sagaalkii kulan ee ugu dambeeyay ee ay marti ahaayeen kulamada horyaalka ee ay la ciyaareen Man City waxa ay ahayd bishii Janaayo ee sanadkii 2015.
>- Si kastaba ha noqotee, Arsenal ayaa badisay kulankeedii ugu dambeeyay ee tartan rasmi ah, iyadoo Pierre-Emerick Aubameyang uu dhaliyay labada gool ciyaartii semi-finalka FA Cup ee dhacay bishii July.
>- Manchester City ayaa haysata afar dhibcood waana dhibcihii ugu yaraa ee ay heshay kaddib saddex kulan oo xilli ciyaareed ah tan iyo kal ciyaareedkii 2010-11.
>- Waxay kaliya labo jeer lumisay labadoodaba kulan ee furitaankii gurigooda xilli ciyaareedyadii 1930-31 iyo 1953-54.
>- Kevin De Bruyne ayaa gacan ka geystay todoba gool siddeediisii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka oo uu ku soo bilowday ciyaarto ay ka horjeedaan Arsenal, waxa uu dhaliyey shan gool isagoo caawiyey labo kale.
>- Gunners ayaa guuleysatay siddeed ka mid ah 12-keedii kulan ee la soo dhaafay horyaalka Premier League, waana in hal ka badan intii ay guuleysteen 28 kulan oo markaas ka hor ay ciyaareen.
>- Waxa ay guuleysan karaan Arsenal afar kulan oo ka mid ah shantooda kulan ee ugu horreeya hroyaalka xilli ciyaareedkan markii ugu horreysay tan iyo fasal ciyaareedkii 2013-14.
>- Alexandre Lacazette ayaa goolal dhalin kara afar kulan oo isku xigta oo horyaalka ah oo uu u ciyaaray Arsenal markii ugu horreeysay.
Horudhac: Inter Milan vs AC Milan… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka caawa ee Derby della Madonnina)
Macallin Ole Gunnar Solskjaer oo qiray xilliga uu Donny van de Beek ku soo bilaaban doono safka hore ee Man United